News - သင်၏မျက်နှာအသွင်အပြင်အတွက်မျက်မှန်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ
နံနက် ၉ နာရီမှညနေ ၇ နာရီအထိတစ်ရက် ၇ ရက်
သင်၏မျက်နှာအတွက်မည်သည့်ဘောင်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေရန်ကြိုးစားဖူးပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့အတွက်နည်းနည်းလမ်းညွှန်နဲ့လူတိုင်းအတွက် frame တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်သိရလိမ့်မယ်။ သင့်အတွက်ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုငါတို့ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
သင့်တွင်အောက်ပါပုံသဏ္oneာန်များရှိနိုင်သည်မှာ - ဘဲဥပုံ၊ စတုရန်း၊ အဝိုင်း၊ နှလုံး၊ စိန်တို့ဖြစ်သည်။ မှန်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သင်၏မျက်နှာအသွင်အပြင်များကိုအနီးကပ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မည်သူသည်သင့်ကိုကိုက်ညီသည်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ သင့်မျက်နှာ၌မည်သည့်ပုံသဏ္determineာန်ရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်သင့်မျက်မှန်သည်မည်သည့်အရာနှင့်ပြည့်စုံမည်ကိုအောက်တွင်ဆက်လက်လေ့လာပါ။
အမျိုးမျိုးသောမျက်မှန်ပုံစံများသည်ဘဲဥပုံမျက်နှာများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဘဲဥပုံပုံသဏ္withာန်ရှိသောမျက်နှာသည်နဖူးဆီသို့အနည်းငယ်ကျဉ်းသောပိုမိုမြင့်မားပြီးအနည်းငယ်ကျယ်သောပါးရိုးများပါရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အရွယ်အစားကြီးမားပြီးကျယ်ပြန့်သောဘောင်များဖြင့်၎င်း၊ ဘဲဥပုံမျက်နှာပုံသဏ္ာန်ဖြင့်စိုပြေသောအရောင်၊ အရောင် (သို့) ဘောင်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်ရဲရင့်စွာရဲရင့်စွာခံစားပါ။ ရင်ပြင်၊ trapezoid, လိပ်နှင့်စတုဂံပုံ - ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။
ဘယ်မျက်မှန်ပုံစံမျိုးစုံ Suit Square မျက်နှာများ?
အမျိုးမျိုးသောမျက်မှန်ပုံစံများသည်စတုရန်းမျက်နှာများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒါဟာတင်ပါးဆုံရိုးဖြစ်ရုံတင်ပါးဆုံရိုး! သင့်တွင်စတုရန်းပုံရှိသောမျက်နှာရှိပါကမျက်လုံးအများစုသည်သင်၏အင်္ဂါရပ်များကိုချောမွေ့စေသည်။ အချိုးအစားကိုကြည့်လျှင်စတုရန်းမျက်နှာများသည်မေးရိုးနှင့်နဖူးတစ်လျှောက်အကျယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤပုံသဏ္aာန်ကိုခိုင်ခံ့သောမေးရိုးဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်နှာခေါင်းပေါ်တွင်ထိုင်သောမျက်မှန်များသည်ဤမျက်နှာကို ပို၍ ချောမွေ့စေသည်။
သင်၏အပြင်းထန်ဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုအာရုံစိုက်ရန်အတွက်ထောင့်အစားမဟုတ်ဘဲမှောင်မိုက်။ အဝိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ မျက်ခုံးပတ်လည်ရှိဘောင်သည်ပျော့ပြောင်းစေပြီးသင်၏ angular အင်္ဂါရပ်များနှင့်မတူဘဲကွဲပြားခြားနားစေပြီးသင်၏မျက်နှာကိုထင်ရှားစေသည်။ Rimless နှင့် Semi-Rimless frames များသည်စတင်ရန်ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
post အချိန်: သြဂုတ် -18-2020